विप्लव समूहको बन्द प्रभाव, कहाँ– के–के भयो ? « Janata Times
विप्लव समूहको बन्द प्रभाव, कहाँ– के–के भयो ?
काठमाडौं, १० असार । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको दिन आज बर्दियामा दुई वटा प्रेसर कुकर बम फेला परेको छ । सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकास्थित हुलाकी मार्ग अन्र्तगत डिभिजन बन कार्यालयनजिक तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत कर्तनिया चोकमा कुकर बम भेटिएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव नेतृत्वको पार्टीले बन्दलाई लक्षित गर्दै सडकमा बम राखेको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । बम भेटिएका स्थानमा कडा सुरक्षा दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका निमित्त प्रमुख डीएसपी मदनजीत महराले बताए । नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बम निक्रिय पार्ने काम गरिरहेको डीएसपी महराले जानकारी दिए ।
ललितपुरको जावलाखेलमा प्रेसर कुकर बम भेटिएको छ । मंगलबार बिहान जावलाखेल खेल मैदान अगाडी होटलको सटरमा भेटिएको प्रेसर कुकर बम नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बिहान ७ बजे डिस्पोज गरेको छ ।
पोखरामा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाको बम डिस्पोजल टोलीद्वारा डिस्पोज
पोखराको व्यस्त बजार चिप्लेढुंगामा रहेको फेवा एग्रिकल्चर प्रालिमा सोमबार साँझ शंकास्पद वस्तु भेटिएपछि मानिसहरूमा त्रास फैलिएको छ । चिप्लेढुंगाको मण्डी भनेर चिनिने उक्त स्थानमा साँझ पाँच बजेको समयमा झोलामा शंकास्पद वस्तु भेटिएपछि व्यवसायी र ग्राहकलाई प्रहरीले हटाएको थियो । करिब तीन घण्टा मण्डीमा तरकारी तथा फलफूलको कारोबार बन्द भएको थियो । सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले सर्च गरेर डिस्पोज गरेपछि साँझ जनजीवन सामान्य बनेको हो ।
भद्रपुर नगरपालिकामा बम
भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा रिमोट कन्ट्रोलसहितको प्रेसर कुकर बम फेला परेको छ। नगरपालिकामा फेला परेको रिमोट कन्ट्रोलसहितको प्रेसर कुकर बम नेत्र विक्रम चन्दनेतृत्वको समूहले राखेको झापाका प्रहरी, प्रशासन प्रमुखको दाबी छ। मेयर तथा उपप्रमुखको कार्य कक्ष चढ्ने सिँढीको तल कालो ब्यागभित्र रिमोट कन्ट्रोलसहितको प्रेसर कुकर बम राखिएको प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
रामेछापको सदरमुकाम मन्थली नजिकै ग्यास सिलिण्डर पड्किएको छ । नेत्रविक्रम चन्द समूहले आह्वान गरेको पूर्व सन्ध्यामा कार्यकर्ताले राति २ बजेतिर मन्थली बसपार्क भन्दा केही माथिको पाखामा उक्त विष्फोट गराएको हो ।
चन्द समूहले मंगलबार आव्हान गरेको बन्दको प्रभाव बिहानै देखि जिल्ला सदरमुकाम लगायत ग्रामीण क्षेत्रमा परेको छ । यातयातका साधन आंशिक मात्र चलेका छन् । लामो दुरीका कुनै पनि साधन सञ्चालन भएका छैनन् । शैक्षिक संस्था खुलेका छैनन् । बजार भने आंशिक रुपमा खुलेको छ । बझाङको बुङ्गल नगरपालिका वार्ड नं–११ को कार्यालयमा संकास्पद बस्तु भेटिएको छ । त्यस तर्फ नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलि पुग्दै छ ।